Baarlamaanka Archives - Page 4 of 6 - Sawirrotv
Xildhibaanad Katirsan Baarlamaanka Federaalka oo Maanta Geeriyootay
September 08, 2016 – Saaka aroortii hore ayaa waxaa isbitaal ku yaala dalka Hindiya, ku Geeriyooday Xildhibaanad katirsaneyd Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya oo lagu magacaabi jiray allaha u naxariistee Xildhibaanad Fadumo Nuur Maxamed. Xildhibaanad Fadumo Nuur Maxamed ayaa dhawaan dalka Hindiya u gaartay in laga daweeyo xanuun hayay, waxaana geerida Xildhibaanada warbaahinta u xaqiijiyay xildhibaano katirsan Baarlamaanka …
Sharuudaha Lagu Xiray Ergada Soo Xulaysa Baarlamaanka Cusub ee Federaalka (AKHRISO)
September 05, 2016 – Waxaa soo baxay shuruuda laga rabo inay buuxyaan ergeda dooraneysa Xildhibaanada kamid noqonaya Baarlamaanka Cusub ee dowlada Federaalka ee Soomaaliya. Sharuudaha laga rabo Ergayda dooraneysa Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa waxaa kamid ah: WAA MAXAY ERGAY? 1-Waa codbixiyaha ka codeyn doona Hannaanka doorasho ee 2016-ka. 2-Ergadu waa tirada xubnaha xaqa u leh in …
Dagaal ka Dhacay Baarlamaanka Dalka Isra’el kadib Markii Nin Carab ahi Sheegay…(VIDEO)
June 30, 2016 – Baarlamaanka dalka Isra’el ayaa waxaa ka dhacay is qab-qabsi iyo muran kadib markii nin ka mid ah dadka Carabta ah ee ku jira Baarlamaanka dalkaasi uu sheegay in ciidamada dalka Isra’el ay laayaan maatada. Warkani ayaa waxa ka caroodsy, xildhibano Yahuud ah oo sheegay inay meesha feer iyo Haraanti uga saarayaan hadii …
Baarlamaanka Federaalka oo Qodobo ka Bedelay Dastuurka KMG ah ee Dalka (VIDEO)
June 15, 2016 – Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay Muqdisho ayaa waxa ay wax ka badaleen qodobbo ka mid ahaa dastuurka KMG ah ee dalkan uu leeyahay. Kulankii maanta oo uu shir guddoominayay Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Federaalka ee Soomaaliya Mudane Jeylaani Nuur Iikar ayaa Xildhibaanada waxa ay wax …
Xildhibaanada Baarlmaanka Federaalka oo Maanta ka Badbaaday Ceebeey Tacaal (VIDEO)
June 13, 2016 – Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa maanta go’aan si fiican loo miisaamay ka qaatay, dibna u celiyay qodobkii ay maanta ka doodayeen oo ahaa sharciga xuquuqda siyaasiga. Xildhibaanada ugu caqliga roon ee baarlamaanka ku jira ayaa soo jeediyay in sharcigani dib loo dhigo maadaama ay jiraan dad badan oo dalka gudihiisa ku …
Baarlamaanka Federaalka oo Meel Mariyay Hindise Sharciyeedka Maxkamadda Dastuuriga (VIDEO)
June 11, 2016 – Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Mudane, Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo maanta shir guddoominayay kulan ay Xildhibaanada baarlamaanka ku yeesheen xarunta Golaha Shacabka ayaa markale xusuusiyay muhiimadda ay leedahay in ay wax ka badal ku sameeyaan dastuurka oo ay u codeeyaan, si loo badbaadiyo dasatuurka dalka. Guddoomiyaha Guddiga Dib u eegista dastuurka KMG-ah …
Xildhibaanada Baarlamaanka oo Maanta u Codaynaya xilka guddiga xaduudaha Dalka
June 11, 2016 – Xildhibaanada Baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa in ay ku kulmaan Xarunta golaha shacabka ee Magaalada Muqdisho. Baarlamaanka ayaa maanta Cod u qaadi doona Qodobo Muhiim ah oo ay kamid yihiin Qodobka 10-naad ee Mudada Xil haynta Guddiga Xaduudaha iyo sidoo kale wax ka badal lagu sameynayo Dastuurka. Xildhibaan …
Xildhibaanadda Baarlamaanka oo Maanta Ansixiyay Sharciga Axsaabta Siyaasada (VIDEO)
June 06, 2016 – Mudanayaasha Baarlamaanka Federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay hindise sharciyeedyo dhowr ah oo uu ugu muhiimsanaa sharciga Axsaabta siyaasada. Qaar ka mid ah Xisbiyada siyaasada ee dalka ayaa horay ugu eedeeyay Xukuumadda Soomaaliya inay ka caga jiideyso meel marinta sharciga asxaabta siyaasada, inkastoo sharcigan uu dhowr marxalad soo maray. Dhinaca kale waxaa kulankii …
Baarlamaanka Federaalka oo Maanta ka Doodaya Qorshaha Doorashooyinka Dalka (Dhagayso)
May 21, 2016 – Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta oo Sabti ah markii labaad ka doodaya qorshaha doorasho ee dalka, iyadoo Markii koowaad oo ay ka doodeen sharcigan ay ahayd maalintii Khamiista ee la soo dhaafay. Xildhibaan Maxamed Cumar Maxamuud oo ah Habdhowraha Baarlamaanka ayaa warbaahinta u sheegay in Kulanka Baarlamaanka uu maanta jiro islamarkaana Xildhibaanada …
Xildhibaan Fowziya Yusuf Haji oo Laga Wareystay Midowga Somaliland & Somalia (VIDEO)
May 20, 2016 – Fowziya Yusuf Haji oo mar soo noqotay wasiirka arimaha Dibadda ee dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa waxaa laga waraystay halka ay marayso qaaban qaabada doorashooyinka dalka lagu wado inay ka dhacaanbisha Agoosto ee sanadka. Xildhibaan Fowsiyo oo iminka ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa sheegtay inay magaaladaasi u joogato, oo …